यस्तो एउटा ठाउँ, जहाँ एकादशीका दिन मात्र लगाउँछन् दशैँको टिका ! – Saurahaonline.com
यस्तो एउटा ठाउँ, जहाँ एकादशीका दिन मात्र लगाउँछन् दशैँको टिका !
काठमाडौ,३ कात्तिक । अन्नपूर्ण मन्दिरका पा:ला:, असं बहालका शाक्य, तक्ष बहालका ब्रजाचार्य र असनकै तुलाधरहरुले दशमीका दिन नभई आज अर्थात एकादशीका दिन टीका लगाएका छन्। अन्नपूर्ण जात्रा एकादशीमा मनाउने भएकाले टीका पनि त्यही दिन लगाउने परम्परा रहदै आएको छ। शनिवार खड्ग जात्रा(पायः) निकालेपछि प्रायले टिका थाप्ने प्रचलन रहदै आएको छ।
किन एकादशीका दिनदेखि मात्र टीका ?
लाभरत्न तुलाधरका अनुसार असं चालंका बारे बुझ्न असनको नामका बारे बुझ्न जरुरी छ। धाल्छिक बहालमा रहेको पुरानो शिलालेखमा यस स्थानको नाम ‘अशोकमण्डप’ उल्लेख थियो।
अशोकले भारत वर्षमा शासन गरिरहेका बेला उनी स्वनिगः अर्थात् काठमाडौं उपत्यकामा आए। उनका चेलाहरुले विभिन्न स्थानमा चिबहाः र चैत्यहरु बनाए। अशोकले यस स्थानमा ती चिबहाः र चैत्यहरु बनाएका कारण यस स्थानको नाम ‘अशोकमण्डप’ बन्न गएको लाभरत्नले बताए।
यस्तै, टीकाका दिन तुलाधरहरुले असनमा व्यापार गर्दै व्यस्त हुने भएकाले उनीहरुले दशमीको भोलिपल्ट टीका लगाउने मान्यता रहेको दीपेश तुलाधरले बताए। टीकाका दिनहरु पनि मान्छेहरुलार्इ विभिन्न सामान चाहिने हुँदा उनीहरुलार्इ दुःख नहोस भनेर आफ्ना पूर्वजहरुले टीका एकदिन पछि मनाउन सुरु गरेको उनले बताए। पहिलोपोष्टबाट साभार